I-S&P 500 yooVimba-Funda ukuRhweba
tag: I-S & P 500
I-S&P 500 iye yaphuka emva kokusilela ukubamba ngaphezulu kwe-4580
Amanqanaba okumelana: 4810, 5000
Amanqanaba enkxaso: 4580, 4270
Uqikelelo loNyaka lwe-S&P 500 (2022)
I-S&P ye-500 ye-Forecast yoNyaka-Ixabiso ligcina i-Bullish Fervor
I-S & P 500 igcina i-bullish fervor nanjengoko ingena kunyaka we-2022. Imarike iye yanyuka nge-channel parallel ukusuka kude ne-2018. Nangona kunjalo, nangona iqhubela phezulu, i-S & P 500 yathotywa ngaphantsi komgca ophakathi wesiteshi esifanayo. Ekuqaleni konyaka ka-2021, ixabiso lonyuse umoya walo kwaye lenyuka laya kutsho kumgca ophakathi. I-pullback incede ekugqibeleni iphakame ngaphezu komgca ophakathi wetshaneli ehambelanayo. Oku kuqhubekile ngo-2022.
Amanqanaba okumelana: 4810.0, 2947.0
Amanqanaba enkxaso: 2144.0, 2507.0
S&P 500 iSicwangciso seXesha elide: Bullish
Imarike yaqala ukubonisa i-bullish fervor emva kokuba iphule umgca wexabiso le-2144.0 ngoJulayi 2016. I-S & P igcine ukunyuka okuzinzileyo de yadibana nenkcaso kwinqanaba elinamandla le-2947.0. Ixabiso licinezelwe ngaphantsi kweli nqanaba, liqhekeza ngaphantsi kwesiteshi kodwa usebenzisa i-2507.0 njengenkxaso. Oku kwaqhubeka kwada kwikota yokuqala ye-2020 xa ixabiso livuselelwe kwaye liqhekeza imiqobo ukufikelela kwi-3671.0 kwiikhandlela ze-bullish ezilandelelanayo.
Ixabiso libonwa ngokusebenzisa i-retrace kunye nepatheni yempompo ukukrazula eminye imiqobo emininzi ukusuka ngaphantsi kwinqanaba le-3671.0 ide ifike kwinqanaba lexabiso langoku le-4810.0. Ngenxa yoko, i-S & P 500 iphantse iphindwe kabini kwixabiso kwixesha elifutshane ukusuka kwi-2020 ukuya kwi-2022. I-Parabolic SAR (Stop and Reverse) isabonisa ukuxhamla kunye namachaphaza ayo angaphantsi kweekhandlela zenyanga, kodwa imarike, nangona kunjalo, ijongene nobunzima kakhulu. uvavanyo kwi 4810.0. Isalathiso saBadala, ngelixa sikwixabiso elilungileyo, siye sajikeleza emacaleni kwaye ngoku sinencam yaso ethontsizayo.
S&P 500 iSicwangciso seXesha eliPhakathi: Bullish
Kwitshathi yeveki, ixabiso lijongene nokuchasana kwe-4810.0 kunye nokuzama ukuphuma phezulu kwinqanaba elihambelanayo. Oku kubala ukuncitshiswa kwesantya kwixabiso. Kwitshathi yeveki, umgca wamandla we-EFI unokubonwa ngokutshintshana phakathi kwexabiso elilungileyo nelibi. Ngenxa yoko, kulindeleke ukuba ixabiso liya kuqhubeka lihamba phakathi kwenqanaba lokumelana ne-4810.0 kunye nomgca ophakathi wetshaneli de iqhekeze kwinqanaba lokumelana kwaye iphinde iqhube intshukumo yayo ephezulu.
I-S&P 500 imile ngaphantsi kwe-4,810 yeedola njengoko iJonga kuManqanaba eXabiso eliPhezulu
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Januwari 5
I-S&P 500 imile ngaphantsi kwe-4,810 yenqanaba elibalulekileyo njengoko ijolise ekuphuleni umhlaba ongaphezulu. Nangona iibhere zemarike zoyisiwe kangangexesha elithile, zifunyaniswa ziphakamisa iintloko zazo ngamaxesha athile, ukuze zithintele ukunyuka kwexabiso. Umzekelo onjalo yile nto i-S&P 500 isandula ukubuya kuyo. Ngomhla we-30 kaNovemba wonyaka odlulileyo, iibhere zangena ukuze zithintele imarike kwaye ziyishiye igxininise ngaphantsi kwe-$ 4,720 ukuya kwinyanga ezayo.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 5,000, $ 4,810, $ 4,720
Amanqanaba enkxaso: $ 4,050, $ 4,270, $ 4,500
I-S&P 500 iTrendi yeXesha elide: Ukusukela
Kwangoko ngo-2021, imakethi nayo yayimi ngaphantsi kwe-4,500 yenqanaba elibalulekileyo. I-S&P 500 igcinwe phakathi kwe-4,500 yeedola kunye ne-4,270 yeedola. Imeko yade yagrogrisa ngokuphazamisa imarike kwikhondo layo eliphezulu, kodwa iinkunzi zenkomo zabuya zachacha ngokugqwesileyo ukuze zidlule kuxhathiso lwe-4,500 yeedola ezingama-4,720 kunye nokugcina ixabiso elongeziweyo lemali yokuhlawula amatyala. Oku ke kwaphakamisa ixabiso kwi-XNUMX yeedola, apho ukuhlanganiswa okunye kwenzeka.
Emva kokuphuma kwinqanaba elingaphantsi kwe-4,720 yezinga elibalulekileyo, ngaphambi kwexesha, ixabiso liye labanjwa kwakhona ngaphantsi kwe-4,810 yexabiso lexabiso. Oku kukunyuka kwexabiso le-1.88% ukusuka kwinqanaba lokugqibela apho ixabiso libanjwe. Oku kungabonakalisa ukonyuka kwamandla e-bearish. I-Stochastic Oscillator sele ibonakalisa imeko egqithisiweyo, kwaye sinokulindela ukubona ukubuyiswa kwakhona ngokukhawuleza kunokuba kamva. Ukuba iinkunzi aziwunyusi umdlalo wazo, iibhere zinokuba nenkunzi.
Itshathi yeeyure ze-4 ibonisa ukuba ixabiso lihlehlisiwe ukusuka kwi-4,810 yeedola ngezihlandlo ezine, linika iibhere ngakumbi kwimarike. Isalathisi se-EFI (i-Elders Force Index) sibonisa umgca wayo wamandla ukuba ungene kakhulu kwixabiso elibi. Imigca ye-Oscillator ye-Stochastic nayo iyawa ngenxa yemeko yokuthengwa kakhulu. Ixabiso kulindeleke ukuba lihlale liphakathi kwe-$4,810 kunye ne-$4,720 de amandla emarike aqhube ixabiso eliphezulu (okanye ngaphantsi).
I-S&P 500 iyaqhubeka emacaleni iHamba phakathi kokuqhambuka kobuxoki
Amanqanaba okuchasa: 4710, 4760, kunye ne-4800
Amanqanaba enkxaso: 4560,4530 kunye ne-4500
I-S&P 500 Ixabiso lexesha elide Trend: Bullish
I-S&P 500 ibikwintshukumo ephezulu phakathi kokuqhambuka kobuxoki. Imarike ifikelele kwinqanaba eliphezulu le-4714.40. Ixabiso lesalathiso lingaphezulu kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukunyuka okunokwenzeka kokunyuka kwamaxabiso. Ukusukela nge-1 kaNovemba, i-uptrend iye yapheliswa njengoko isalathiso siphinde saqala ukuhamba ecaleni. Ngomhla wama-22 kaNovemba, i-S&P 500 yawela kwinqanaba eliphantsi le-4492 kwaye yaphinda yaqala phezulu. Namhlanje, iinkunzi zenkomo ziye zaphuka ngaphezu kwenqanaba lokumelana kodwa zijongene nenye ukuchaswa kwinqanaba le-4730.
I-S & P 500 ikwinqanaba le-63 ye-Relative Strength Index kwixesha le-14. Ibonisa ukuba isalathiso sikwindawo ye-uptrend kwaye iyakwazi ukunyuka. Umgca weentsuku ze-21 kunye nomgca weentsuku ze-50 ezihambayo zinyuka zinyuka zibonisa ukunyuka. I-uptrend iyaqhubeka nje ukuba umgca wokuhamba uhlala ungophulwanga. Umyinge weentsuku ezingama-21 uthathwa njengenqanaba lenkxaso.
S&P 500 Ixesha eliPhakathi iTrendi: Uluhlu
Kwitshathi yeyure ezi-4, iS&P 500 ikwindlela esecaleni. Abathengi baye basilela ukugcina ixabiso lesalathiso ngaphezu kokuchasana okungaphezulu. Ukususela nge-12 kaDisemba, imarike idibene neengqungquthela ezintathu zobuxoki. Ngokomzekelo, nge-23 kaDisemba, iinkunzi zenkomo ziye zaphuka ngaphezu kwenqanaba lokumelana ne-overhead. Imarike yafikelela kwinqanaba le-4744 kwaye yagxothwa. Oku kuye kwaba isenzo sexabiso ukususela ngoNovemba.
SPX500USD – 4 – Itshathi yeyure
Izalathi zeTshati yeeyure ezi-4 zokuFunda
I-S&P 500 ingaphezulu koluhlu lwe-80% yestochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ikummandla othengiwe kakhulu. Ukuqhubela phambili ukunyuka kwamaxabiso akunakwenzeka njengoko abathengisi bevela kummandla othengwe ngokugqithisileyo. I-S&P 500 inokwehla ngaphantsi kokuchasana okuphezulu. I-21 yeentsuku kunye ne-50-day imigca ehambayo ihamba ngokuthe tye ibonisa indlela esecaleni.
Imbonakalo ngokubanzi yeS & P 500
I-S&P 500 ikwindlela esecaleni phakathi kokuqhambuka kobuxoki. Abathengi basilele ukugcina amandla e-bullish ngaphezulu kokuchasana okungaphezulu. Ngenxa yoko, inkqubo yokulinganisa iya kuqhubeka iintsuku ezimbalwa.
tags Uhlalutyo lwamaxabiso, I-S & P 500
I-S&P 500 Ayinakuzinza ngaphezulu kwe-4720, yenza uLungiso oluya ezantsi
Amanqanaba okumelana nawo: 4710, 4760, kunye ne-4800
Amanqanaba enkxaso: 4560,4530 kunye no-4500
I-S&P 500 ibikwinyathelo eliya phezulu ukuya kutsho ngoNovemba 8 kodwa yenza isilungiso esihlayo. Abathengi batyhalele isalathiso ukuya phezulu kwe-4714.40 kodwa abakwazanga ukugcina amandla e-bullish. Isalathiso sagxothwa emva kweeveki ezintathu zokuhamba ngecala ngaphantsi kokuchasana okuphezulu. Isalathisi semali sawela phantsi kwinqanaba le-4492.20. I-S & P 500 yawela ngaphezu kwenkxaso ye-bullish trend line kwaye ngaphezu kwe-21-day line ezihambayo ezihambayo. Oku kuyikhuthaza ukuba iphakame phezulu. NgoDisemba, i-S & P 500 yavuka kwaye yaphinda yaphinda yachasa ukuchasana okuphezulu kwinqanaba le-4713.70. Namhlanje, isalathisi sibuyela kwi-downside. I-S&P 500 iya kuba nesantya esisezantsi esikhawulezileyo ukuba ixabiso liyaphuka ngaphantsi kwe-avareji ehambayo.
I-S & P 500-Itshathi yeveki
Kwitshathi yeveki, i-bullish trend line izotywe ebonisa amanqanaba enkxaso yamaxabiso. I-uptrend iyaqhubeka ukuba amaxabiso ayavavanywa kwaye ahlala engaphezulu komgca we-bullish trend. Nangona kunjalo, ukuba ixabiso liyaphuka kwaye livale ngaphantsi komgca wokuhamba, kuthathwa ukuba i-uptrend iphelile. Imivalo yexabiso ingaphezulu kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukuba i-uptrend iyaqhubeka.
Kwitshathi yosuku, iS&P 500 ikwindlela esecaleni. Ngomhla we-8 kaNovemba, ukunyuka kwaphazamiseka njengoko isalathisi sasinyanzeliswa ukuba sihambe ecaleni. Ngomhla wama-26 kaNovemba, i-S&P 500 yajongana nokugatywa okuqinileyo njengoko amaxabiso ehla kwaye aqhekeka ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo. Iinkunzi zabuyela ngokukhawuleza kwi-downtrend. Ukubuyiselwa kwakuhlala ixesha elifutshane njengoko lijongene nokukhatywa ngoDisemba 16. Isalathiso siwile kodwa sithengisa phakathi kwee-avareji ezihambayo.
I-S & P 500 - Itshathi yemihla ngemihla
Ingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Imarike ikwimo ye-bearish. Ixabiso lesalathisi lingaphantsi komgca we-21 weentsuku ezihambayo kodwa ngaphezu komgca we-50 weentsuku ezihambayo ezibonisa ukuhamba kwecala.
I-S&P 500 ikwindlela esecaleni kodwa yenza ulungiso oluya ezantsi. I-uptrend iya kuqala ukuba abathengi baphule ukuchasana okuphezulu kwinqanaba le-4720. Okwangoku, kukulungiswa okuphantsi. Abathengi kuya kufuneka batyhale isalathiso ukuya kwindawo ye-bullish.
Iinzuzo ze-S&P 500 zoSuku lwe-3 ngokulandelelana Njengomsongelo we-Omicron Uphela
Uhlalutyo lwexabiso le-S&P 500 – nge-8 kaDisemba
NgoLwesithathu, i-S&P 500 ifunyenwe ngosuku lwe-3 ngokulandelelana, njengoko abatyali-mali babonakala ngathi baludlulile uloyiko lwabo malunga noku. Ukwahluka kwe-Omicron. Isalathiso siyaqhubeka ukuhlala ngaphezulu kwamanqanaba angama-4600 njengoko ukutsalwa okuthe kratya kuhlala kungapheli kuthetha ukuba utyando olukhulu luseza.
Amanqanaba okumelana: 4800, 4744, 4720
Amanqanaba enkxaso: 4631, 4600, 4551
Ngelixa ukurhweba kudlule amanqanaba angama-4600 ngaphambili ngemini, isalathiso songeze kwi-rebound yezolo ukusuka kwi-4600 ukuchasana okuthe tye kwajika inkxaso. Ngelixa imarike ithengisa ngaphezu kwinqanaba lenkxaso kwi-4600, i-uptrend iqikelelwa ukuba iqhubeke, kunye nenqanaba lokumelana ne-4744 lifikeleleke ngokulandelayo.
Ngakolunye uhlangothi, i-downtrend ingaqala ngokukhawuleza ukuba imarike iwela ngaphantsi kwenqanaba lenkxaso ye-4600, kunye nokuhla ukuya kwinqanaba lenkxaso kwi-4500 kunye nokunyuka kwenkxaso ye-trendline kwi-lows yakutshanje ye-4492 ukususela nge-3 kaDisemba.
Ngexesha leseshini yokurhweba yangoLwesithathu, i-S&P 500 inyuke yaya kwi-4713 ifumana malunga neepesenti ze-0.07. Kumanqanaba e-4700, isalathisi sirhweba ngaphezu komyinge ohambahambayo we-5 kwipatheni yesiteshi esiphezulu. Isalathisi kulindeleke ukuba siphakame ngexesha leseshoni yokurhweba elandelayo, ngokwezalathi zobugcisa. Amanqanaba e-4744 anokuba yinjongo enokubakho kwiinkunzi zeenkomo.
Ukuchasana okuthe tye kwi-4720, ngakolunye uhlangothi, kunokusebenza njengokuchasana kwesalathiso semali kule seshoni kunye nelandelayo. Ukuba i-S & P 500 iyawa, iya kuxhaswa kwi-dips ngeeyure ze-4 ezihambayo ezihambayo ze-13 kufuphi namanqanaba e-4670, apho abathengi banokuphinda bavele.